Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba » Ukuhamba ngenqwelomoya ukusuka eIndiya ukuya eCanada kuhlala kunguHayi omkhulu
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zeMpilo • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ezothutho Canada zandisa iSaziso esiya eAirmen (NOTAM) esithintela zonke iinqwelo-moya zabakhweli nezizimeleyo eziya eCanada zisuka eIndiya kude kube ngoSeptemba 21, 2021
Ezothutho Canada zandisa izithintelo kwiinqwelomoya ezivela ngqo eIndiya.
Ukusebenza kwemithwalo kuphela, ukuhanjiswa kwezonyango okanye iinqwelomoya zomkhosi azifakwanga.
Abakhweli abasuka eIndiya besiya eCanada ngendlela engathanga ngqo bayacelwa ukuba bafumane uvavanyo lwe-COVID-19 olusebenzayo lwangaphambi kokuhamba kwilizwe lesithathu.
The Urhulumente waseKhanada ibeka phambili impilo nokhuselo lwabo bonke abantu eCanada ngokuqhubeka nokuthatha umngcipheko osekwe kumngcipheko kunye nendlela yokulinganisa ukuvula umda kwakhona. Indlela ecwangcisiweyo yaseCanada yokunciphisa amanyathelo emida yaziswa ngokuqhubeka kokubeka esweni idatha ekhoyo kunye nobungqina besayensi, kubandakanya nenqanaba lokugonya abantu baseCanada kunye nokuphucula imeko yethu yesifo.
Ngokusekwe kwingcebiso yezempilo yoluntu yakutshanje evela kwi-Arhente yezeMpilo kaRhulumente yaseKhanada, iTrans Canada iyandisa iSaziso kwiAirmen (NOTAM) ethintela bonke abakhweli bezorhwebo nabangasese. Iindiza eziya eCanada zisuka eIndiya Kude kube nguSeptemba 21, 2021, ngo-23: 59 EDT. Zonke iinqwelomoya ezithunyelwayo nezizimeleyo zabakhweli eziya eCanada zisuka eIndiya zixhomekeke kwi-NOTAM. Ukusebenza kwemithwalo kuphela, ukuhanjiswa kwezonyango okanye iinqwelomoya zomkhosi azifakwanga.
Ezothutho Canada ikwandisa iimfuno ezihambelana nelizwe lesithathu langaphambi kokuhamba kovavanyo lwe-COVID-19 lweemolekyuli zabahambi baseCanada bevela eIndiya ngendlela engathanga ngqo. Oku kuthetha ukuba abakhweli abasuka eIndiya besiya eKhanada ngendlela engathanga ngqo baya kuqhubeka nokufuneka bafumane uvavanyo olusebenzayo lwangaphambi kokuhamba kwilizwe lesithathu- ngaphandle kweIndiya- ngaphambi kokuqhubeka nohambo lwabo oluya eCanada.
The Urhulumente waseKhanada iyaqhubeka nokubeka iliso ngokusondeleyo kwimeko yesifo, kwaye iya kusebenza ngokusondeleyo noRhulumente wase-India kunye nabaqhubi beenqwelo moya ukuqinisekisa ukuba iinkqubo ezifanelekileyo ziyenziwa ukulungiselela ukubuyela ngokukhuselekileyo kweenqwelomoya ngokuthe ngqo xa iimeko zivuma.
Ngelixa iCanada iqhubeka nokuhamba kwicala elifanelekileyo, imeko ye-epidemiological kunye nokugonywa kokugonya akufani kwihlabathi liphela. URhulumente waseKhanada uyaqhubeka nokucebisa abantu baseKhanadi ukuba baphephe ukuhamba okungabalulekanga ngaphandle kweCanada-ukhenketho lwamanye amazwe lwonyusa umngcipheko wokubhencwa kwi-COVID-19 kunye neenguqu zayo, kunye nokusasazeka kwabanye. Amanyathelo emida ahlala ngokuxhomekeke kutshintsho njengoko imeko ye-epidemiological iguquka.